Natombokay ny Geo-Engineering - The magazine - Geofumadas
Jiona, 2019 jeospatial - GIS, Engineering, fanavaozana
Amin'ny fahafaham-po lehibe no anambaranay ny fanombohana ny magazine Geo-engineering ho an'ny tontolo Hispanika. Hanana vanim-potoana telovolana, fanatontosana nomerika multimedia amin'ny atiny multimedia, hisintona amin'ny pdf sy kinova an-tsoratra amin'ireo hetsi-panoherana lehibe izay rakotry ny mpiandany aminy.
Ao amin'ny tantara fototra amin'ity andiany ity, ny teny hoe Geo-engineering dia averina dinihina, satria io sehatra io izay ahitana ny rojom-pifidianana avy amin'ny fisamborana ny angon-drakitra amin'ny fanombohana ny modely ara-barotra tany am-boalohany.
Ao amin'ny pejy afovoany dia misy infographic izay taratry ny fivoaran'ny teny GIS, CAD, BIM izay tamin'ny fandraisany anjara ara-tantara dia nanjary matotra tsy ny fironana manara-penitra amin'ny fitantanana fampahalalam-baovao fa naneho kofehy iraisana izay mitarika famolavolana indray ny fizotran'ny antsoina hoe «siansa ety an-tany», tsy dia miha-voafetra. Ny spectrum amin'ny infographic dia miitatra hatrany amin'ny fampifangaroana ny BIM + PLM ao anatin'ny rafitry ny revolisiona indostrialy fahefatra ankehitriny izay eken'ny fanafohezan-teny toy ny Digital Twins, SmartCities miaraka amin'ny faravodilanitra fa tsy toa lavitra dia ho tonga tokoa raha tsy tsapantsika izany ary koa Izany dia nitranga tao amin'ny indostrian'ny fomba Uber-Airbnb.
Ny iray amin'ireo lahatsoratra lehibe dia misy ny fironana amin'ny fitantanana ny tany, izay naroson'ny Cadastre 2014, miresaka ny zava-bita sy ny fanamby mbola tsy voarakitra amin'ity sehatra ity, izay ny maodelin'ny zava-misy voajanahary dia tokony hampifangaroina miaraka amin'ireo maodelin'ny fanovana ateraky ny zanak'olombelona. Ny fironana izay tadiavin'ny Cadastre 2034 dia aseho amin'ny alàlan'ny fanatonany ny mpampiasa farany izay manana anjara asa mavitrika kokoa amin'ny fanavaozana sy ny fotodrafitrasa momba ny angon-drakitra amin'ny fifandraisan'izy ireo amin'ny zon'olombelona, ​​andraikitra ary fameperana ny filaminam-bahoaka amin'ny alàlan'ny teknikan'ny firaketana. ary tsy ny fifandraisana amin'ny habaka fotsiny.
Noho izany, miaraka amin'ireo lahatsoratra roa fototra, dia misy tranga dimy ampiasaina; telo no nifantoka tamin'ny famolavolana ny tahirin-kevitra voalohany ary ny roa amin'ny vokatry ny fananganana BIM mba hanatsarana ny fizotry ny indostria.
Plex.Earth izay i Lambros amin'ny lahatsoratra nadikan'i Laura García tamin'ny teny Espaniola dia milaza amintsika ny votoatin'ny CAD-GIS mifangaro avy amin'ny filàn'ny Engine Engineers, avy amin'ny fomba fijerin'ny mpitsidika azy manokana:
Tsy nisy safidy: tsy maintsy navaozina izahay miasa amin'ny tena zava-misy eto an-toerana, mahakasika ho an'ny fametrahana manontolo. Very izahay efatra volana, fa ny isa azonay gaga: amin'ny tetikasa 6 tapitrisa dolara, ny redesign dia mihoatra noho ny $ 600.000.
Tamin'izaho nanomboka hamorona fitaovana sasany "Tsotra" hampifandray ny AutoCAD miaraka Google Earth, izay nandritra ny fotoana fohy Izany no tombontsoa azonay - fifaninanana sy fifaninanana.
e-Cassini, dia mampiseho antsika ny mpanorina tao amin'ilay fanadihadiana nataon'ny Shimonti Paoly, toy ny repository-baovao avy amin'ny soridrefitany Hub azo atao ho toy ny teboka iray ny fahamarinana.
Ny topography of LiDAR dia fantatra ankehitriny indrindra amin'ny mpampiasa, miaraka amin'ny be loatra matetika avy amin'ny hevitra teknolojika amin'ny fanamafisana kely kely avy amin'ny Ny fomba fijery ny kalitao, marina sy marina. nefa Noho izany dia maro ireo fanamby mitranga amin'ny fehezan-dalàna ary Feno. The more Hazavao tsara ny toerana, ny lehibe indrindra isa mpampiasa sy ny Valim-pitia tafakatra amin'ny modelin'ny raharaham-barotra.
Ny filoham-pirenena Chasmtech dia manazava ny fomba nahatonga ireo modelim-pitaovana nomerika avy amin'ny sary avy amin'ny satelita dia mahazo ny fahamendrehana akaiky amin'ireo nahazo mivantana.
Tena tiako foana ny fahamarinan'ny ny angona nomen'ny Google. Nisy Ireto misy tranga roa azo atao:
• Conceptual / preliminary design for newMiala sasatra ianao.
• Access to the topography of the basin to ny fandalinana ny tondra-drano HEC-RAS 2
Lahatsoratra iray mahaliana nosoratan'i Nicolas Mangon, mikasika ny mety hisian'ny BIM mifandray amin'ny tontolon'ny AEC.
Rehefa asehonao ny fomba fampifandraisana ity, amin'ny lafiny tsirairay amin'ny tranobe fananganana manatsara ny fahombiazany, ny fiarovana sy ny fandaniana, Tsy ho fanontaniana akory na ny indostria aza dia hifindra amin'ity lalana ity, fa haingana be.
Ao anatin'ity lohahevitra ity, ny gazetiboky dia ahitana ny vaovao avy amin'ireo orinasa lehibe ao amin'ny orinasa; Autodesk, Bentley Systems, ESRI, Topcon, Trimble, Kadaster, Hexagon sy Microsoft.
Manasa anao izahay hankafy ireo pejy famakiana 60 ireo, raha manamboatra ny andiany manaraka. Amin'izao fotoana izao dia atolotra amin'ny endrika nomerika ny magazine, amin'ny alàlan'ny pirinty sy fandefasana amin'ny fangatahana na amin'ny endriny ara-batana amin'ny hetsika izay horaisin'ireo mpandray anjara azy.
Previous Post«Previous Ny tsara indrindra amin'ny BIM Summit 2019
Next Post Vaovao ara-teknolojia ao amin'ny Geo-engineering - Jona 2019manaraka »